IMF oo lacag dayn ah siinayso Ukraine - BBC News Somali
Image caption Madaxa hay'adda IMF, Christine Lagarde, oo hadal jeedinayso
Hay'adda lacagta adduunka, ayaa ansixisay lacag dayn ah oo dhan 17 bilyan oo doolar-ka Mareykanka ah taasoo ay siineyso waddanka Ukraine.
Qeybta ugu horreysa ee lacagtaasi ayey IMF-tu bixinaysaa muddo labada todobaad gudahood ah.
Lacag ka badan 3 bilyan oo doolar ayaa si degdeg ah loo gaarsiin doonaa xukuumadda Kiev, oo ay haysato xaalado dhaqaale iyo kuwo siyaasadeedba.
Si ay u hesho 17-ka bilyan ee doolar ee deynta ah, Ukraine ayaa ballan qaaday in ay sameyn doonto isbadello adag oo dhanka dhaqaalaha ah, gaar ahaan in ay kor u qaado canshuurta ay saarto qiimaha tamarta, iyo in ay meesha ka saarto lacagaha ugu yar ee ay dadka ku shaqeeyaan.
Ukraine ayaa si degdeg ah ugu baahan lacagta ay IMF-tu bixinayso, balse isbadelka ayaa saameyn doono dadka caadiga ah ee Ukraine, waxaana ay taasi dhibaato ku keeni kartaa sumcadda dowladda taagta daran ee Kiev.
Madaxa hay'adda IMF, Christine Lagarde, ayaa sheegtay in heshiiskan lacageed uu fursad u siinayo Ukraine in ay badesho qaabkii ee uu dhaqaalaheedu ku dhisnaa, hasayeeshee uu heshiiskan caqabad kala kulmi karo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan gobolka.
Go'aanka IMF ayaa ka dhigan in Ukraine ay heli karto 15 bilyan oo doolar oo dheeraad ah oo deeq ahaan ay uga heli karto deeqbixiyayaasha kala ah Bangiga Adduunka, Midowga Yurub, Kanada iyo Japan.
Cunna qabateyn la saarayo Ruushka
Madaxweyne ku xigeenka USA oo booqanayo Ukraine